Ahoana ny fomba hanivanana ny spam referral avy amin'ny Google Analytics
Efa nijerijery ny tatitra nataonao momba ny Google Analytics ihany ve ianao, ka mahita olona referrer hafahafa be tampoka ao anatin'ireo tatitra? Mandeha any amin'ny tranokalany ianao ary tsy misy miresaka momba anao, fa misy tony hafa atolotra anao any. Hainao? Tsy nanondro fifamoivoizana tamin'ny tranokalanao mihitsy ireo olona ireo.
Raha tsy tsapanao ny fomba Google Analytics niasa, raha ny tena izy dia misy piksely ampiana amin'ny enta-mavesatra rehetra izay mandray data an-taonina ary mandefa izany any amin'ny motera Google Analytics. Ny Google Analytics avy eo mamaky ny angon-drakitra ary mandamina azy tsara ao anaty tatitra izay jerenao. Tsy misy majia eo!
Saingy ny orinasa spamming adala sasany dia nanamboatra ny lalan'i piksel Google Analytics ary izao dia sandoka ilay lalana ary mahazo ny ohatra Google Analytics anao. Azon'izy ireo ny kaody UA avy amin'ilay script napetrakao tao amin'ilay pejy ary avy eo, avy amin'ny mpizara azy ireo, dia nokapohin'izy ireo fotsiny ireo mpizara GA mandra-pahatongany nipoitra tamin'ny tatitra nataonao.
Tena ratsy tokoa satria tsy nanombohana ny fitsidihana ny tranokalanao akory izy ireo! Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy fomba hanakanan'ny tranokalanao azy ireo. Nandehandeha nitety an'ity niaraka tamin'ilay mpampiantrano anay aho izay nanazava tamim-paharetana ny zavatra nataon'izy ireo hatrany hatrany mandra-pahatongany tao amin'ny karan-dohako matevina. Antsoina hoe a matoatoa referral or referrer matoatoa satria tsy mikasika ny tranokalanao mihitsy izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Raha ny marina rehetra dia mbola tsy azoko antoka hoe maninona i Google no tsy nanomboka nitazona database fotsiny momba ny spam referral. Endri-javatra tsara ho an'ny sehatra misy azy ireo. Satria tsy misy fitsidihana akory, dia manapotika ny tatitra ataon'ireto spam ireto. Ho an'ny iray amin'ireo mpanjifantsika, ny spam referrer dia mahatratra 13% amin'ny fitsidihan'ny tranokalany rehetra!
Mamorona Segment ao amin'ny Google Analytics izay manakana ny spammer referérer
Midira ao amin'ny kaonty Google Analytics anao.
Sokafy ny View izay misy ny tatitra tianao hampiasaina.
Kitiho ny tabilao Reporting, avy eo sokafy ny tatitra tadiavinao.
Eo an-tampon'ny tatitra ataonao, kitiho + Ampio Segment
Lazao ny fizarana Fifamoivoizana rehetra (tsy misy spam)
Amin'ny toe-javatra misy anao dia aza hadino ny milaza azy manilika miaraka amin'ny loharano lalao regex.
Misy lisitr'ireo spam referrer nohavaozina ao amin'ny Github ampiasain'ny mpampiasa Piwik ary tena tsara. Misarika an'io lisitra io ho azy etsy ambany aho ary mamolavola azy tsara miaraka amin'ny fanambarana OR aorian'ny sehatra tsirairay (azonao atao ny mandika sy mametaka azy avy amin'ny faritra an-tsoratra etsy ambany mankany amin'ny Google Analytics):
Tehirizo ny fizarana ary azo alaina amin'ny trano rehetra ao anatin'ny kaontinao izany.
Hahita script and plugins amina taonina maro ianao hanandrana sy manakana ireo spamme referral avy amin'ny tranokalanao. Aza misahirana mampiasa azy… tadidio fa tsy fitsidihana ny tranonkalanao akory ireo. Ireo script ireo dia mampiasa ny pixel GA mivantana avy amin'ny mpizara azy ary tsy tonga tany aminao akory!
Tags: Analyticssakano ny spam referrerGoogle Analyticsspam referrerlisitra spam referrer
Wild Apricot: Sehatra maha-mpikambana ao amin'ny iray karama azy rehetra